I-MobileAppTracking: I-SDK yokufaka okufakiwe kweselula | Martech Zone
I-MobileAppTracking: I-SDK yeselula yokufaka umnikelo
NgoLwesihlanu, Agasti 22, 2014 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
MobileAppTracking inikeza i-SDK (i-Android noma i-iOS) ukuhlanganisa kalula ukubikwa kunoma iyiphi inethiwekhi yesikhangiso noma umlingani wokushicilela ohlakeni lwakho lokuthuthuka. Lapho i-SDK isihlanganisiwe, uyakwazi ukulandelela ngamandla imicimbi kusuka kunoma yimuphi umlingani ovela eceleni. IMobileAppTracking ayinciki ku-UDID njengendlela yesichasiso - zisekela ezinye izindlela zokunikeza ezihambisana nezinqubomgomo zezitolo zohlelo lokusebenza.
Landelela ukufakwa kohlelo lokusebenza lweselula nokuzibandakanya komsebenzisi emuva kumikhankaso yakho yokukhangisa yeselula.
MobileAppTracking ingakunikeza ngemininingwane yokufaka nokuguqula ngesikhathi sangempela, ekuvumela ukuthi ukwazi ukwengeza iziteshi zakho zokumaketha ebudlelwaneni bakho bokukhangisa. Qopha ukuthengisa, ekuthengweni kohlelo lokusebenza, ekubhaliseni, ekuqedweni kweleveli, nenye idatha yokunquma inani lempilo (LTV) nokugcinwa komsebenzisi. Ungakwazi futhi ukulandela ngomkhondo kuzo zonke izinhlelo zokusebenza kudivayisi efanayo yeselula!
Isebenza kanjani i-MobileAppTracking
Ukulandelela Isixhumanisi - Yenza isixhumanisi esiyingqayizivele somthombo ngamunye wokumaketha.
Isikhangiso Seselula - isikhangiso sichofoziwe bese umsebenzisi abonwa ngaso ukubhala iminwe yedivayisi.
App Marketplace - umsebenzisi ufaka uhlelo lwakho lokusebenza.
Ukufanisa - umsebenzisi uvula uhlelo lokusebenza bese i-SDK ikhomba umthombo ngezigxivizo zeminwe.
Ukulandelelwa kohlelo lokusebenza lweselula kuyipulatifomu yokulandela ngomkhondo engachemile enikezela ngomkhondo wesikhathi sangempela nokubika kokukhangisa kohlelo lokusebenza lweselula. Landelela amanethiwekhi amaningi wesikhangiso, abashicileli, kanye nezinkampani eziphethwe ngokuhlanganisa i-SDK eyodwa. Ukulandelelwa kohlelo lokusebenza lweselula kuyipulatifomu yakho yokubuyisana yayo yonke imikhankaso yokukhangisa yeselula.
Ungalandelela ukunikezwa okungafika ku-50,000 mahhala njalo ngenyanga ukuqala bese ukhokha u- $ 0.002 ngesibaluli ngasinye ngemuva kwalokho. Amanani wevolumu anikezwa ukusatshalaliswa okukhulu kweselula okungaphezu kwezigidi ezi-2 noma ngaphezulu.
Tags: isenzoAmanethiwekhi wesikhangiso ahlanganisiweltvamanethiwekhi wesikhangiso eselulaabashicileli bezikhangiso ezingomahambanendlwanaizibalo zohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula sdkmobile ukufaka isichasisoukubika kweselulaukubika kweselula sdkumsebenzisi weselula ltvsdk
Uphuthelwe yimizwa emi-3 kwengu-5 yokwenza ukuvela
Amathiphu Wokubhala Amaphepha Amhlophe Aqhuba Ukuthengisa
Jan 26, 2015 ku-4: 24 AM
Ngiyazibuza ukuthi iyiphi i-Marketing Attribution SDK ethile ezodinga ukuhlanganiswa nomdlalo ngaphambi kweSoft Launch. Futhi ngicela uchaze ukuthi imiphi imicimbi yemidlalo ezolandelwa yi-SDK.